Iividiyo zevidiyo kunye neekhonsoli zevidiyo | Iindaba zeGajethi (Iphepha 2)
I-PlayStation ibhengeze inyathelo lokuDlala eKhaya, iya kuthi inike imidlalo emi-4 emihle kakhulu kwikhathalogu yayo: engafakwanga: Ingqokelela kaNathan Drake kunye nohambo.
Ezona ntloko zibalaseleyo zokudlala kuwo onke amaxabiso kunye namaqonga
Kule nqaku siza kubona okucetyiswayo kwiimarike zangoku. Ukugxininisa umgangatho, ixabiso kunye neqonga.
Kweli nqaku siqokelela uthotho lwezifundo, iinkonzo kunye nemixholo efumaneka simahla ngeentsuku zokuvalelwa kwethu.
Eyona midlalo ilungileyo yeklasi yokupasa ukubekwa
Namhlanje sifumana ikhathalogu yemidlalo engaphezulu kwe-2000 yeklasikhi ukuze uchithe ukubekelwa bucala ekhaya ukhumbula ukuqala komzi mveliso wevidiyo
Konke malunga nePS5 entsha, iinkcukacha zobugcisa ezisemthethweni
Konke oku kutyhilwe nguSony malunga nePS5 entsha kunye neempawu zayo zobugcisa ezisemthethweni, baya kukushiya ungathethi.
Ukuqokelelwa okungafaniyo kwemidlalo yawo onke amaqonga, ukwenza oku kugwetywa okusinyanzelayo ukuba sibe sekhaya kuthwala ngakumbi.
Isishwankathelo sothotho olusethwe kwindalo iphela yomdlalo wevidiyo oyikisayo Umhlali wobubi uhluzwa ngeNetflix uqobo.
Sifundile ngesindululo sikaDell sokubonelela ngesixhobo esincinci kubadlali bebhola abanakho ukubonelela ngawo onke amandla e-Alienware pc
Ukuphonononga i-Energy Sistem ESG 5 Shock headphones
Amandla eSistem ESG 5 Umothuko, ii-headphone zemidlalo ezinowona mgangatho uphezulu womgangatho / wexabiso kwintengiso, amandla, umgangatho kunye netekhnoloji yeVibration yesandi
IGoogle Stadia: yintoni, lithini ixabiso kunye nekhathalogu yemidlalo
Ukuba ufuna ukwazi lonke ulwazi olunxulumene neqonga lomdlalo wevidiyo kaGoogle, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
I-Fortnite ibuyile ngeCandelo lesi-2 sexesha loku-1
Njengoko bekucwangcisiwe, imephu entsha ivela kwisandla sohlaziyo olutsha lwe-Fortnite ukuqala amaxesha onyaka kunye nokufikelela kwisahluko 2
Kuthekani ngeFortnite? Ubuya nini uFortnite?
Kwiiyure ezimbalwa, ukuba uzama ukudlala iFortnite, uyakubona ukuba ekuphela kwento onokuyenza kukucinga ngomngxunya omnyama. I-Fortnite ayisebenzi.
Sine-eFootball PES 2020, eyona nguqulelo inesibindi eyakhutshwa nguKonami kwi-PES yasentsomini kwaye sihlalutya ukuze ukwazi ukukhetha ngoku ukuba yomibini le midlalo isentengisweni.
I-eFootball PES 2020 FC Barcelona Edition iya kuphehlelelwa ngokusesikweni nge-10 kaSeptemba. Fumana ngakumbi malunga nokukhutshwa kwale nguqulo.
Fumanisa zonke iinkcukacha zikaGoogle Stadia, iqonga lokusasaza imidlalo yeqonga eliza kumiliselwa ngokusemthethweni ngo-Novemba.
Umdlalo weKhadi lokuThengisa uMntwana weKhadi ngoku uyafumaneka simahla simahla kwiVenkile yokuDlala nakwiVenkile ye App.
Abasebenzisi beNintendo switch baya kuba nomdlalo uDiablo III ofumanekayo kulo nyaka
Umdlalo odumileyo uDiablo III ubhengeza ukufika kweNintendo console. Umdlalo wasentsomini uya kuba yenye ye ...
I-Sony Releases Limited Edition Translucent PS4 yokubhiyozela iSigidi se-PlayStation esithengisiweyo
Okoko isizukulwane sokuqala sePlayStation sikaSony sifike kwintengiso, esi sixhobo siye saba ngunyaka nonyaka eyona nto ithengiswa kakhulu kwilizwe laseJapan lakwaSony, ithengise ngaphezulu kwe-500 yezigidi zePlayStation kwaye ukuyibhiyozela, izakusungula ushicilelo olukhethekileyo PS4
Inyoka ibuyile kwaye ithatha into ngaphandle kwekhamera entsha ye-Facebook ye-AR
Ngokuqinisekileyo igqala lendawo likhumbula umdlalo oqhelekileyo weNokia, kunye nenyoka. Kwi…
Isizukulwana sesibini semouse yeHyperX, iPulsefire Surge, ngoku iyafumaneka kwintengiso ye-69,99 euro.
Le yiPlayStation Plus kunye nokuPhila ngemidlalo yeGolide kaJulayi 2018
Apha ngezantsi sichaza yonke imidlalo esinokuyikhuphela simahla kwiXbox Live nakwiPS Plus ngoJulayi 2018
I-XboX enye ye-X yee-euro ezingama-189,95. Esi sisicwangciso sokuphinda sinikwe nguMDLALO
Ukuba ucinga ukuvuselela ikhonsoli yakho yakudala yeXbox One X, ngoku ingalixesha, kuba sinokuyifumana ngee-euro ezingama-190 ngokuhambisa ikhonsoli yethu yakudala
I-PlayStation Hits: I-PS4 ibetha ii-euro ezingama-19,99
USony ubhengeze ukumiliselwa komgca omtsha wemidlalo phantsi kwegama elithi PlayStation Hits ngee-euro ezingama-19,99 kuphela
I-Fortnite yeNintendo switchch ikhutshelwe kwizixhobo ezizizigidi ezi-2 ngeeyure ezingama-24 kuphela
Ukufika kwe-Fortnite kwi-Nintendo switchch kuye kwaba yimpumelelo entsha kumdlalo wefashoni kwaye uqokelele ngaphezulu kokukhutshelwa kwezigidi ezi-2 kwiiyure ezingama-24.
Zonke iindaba ezivela kwiNintendo kwi-E3 2018
Inkampani yaseJapan iNintendo izise ngokusesikweni iindaba ezilandelayo eziza kufika kuTshintsho kwi-E3 2018 eLos Angeles
I-Fortnite ngoku iyafumaneka kwiNintendo Shintsha simahla
Umdlalo wefashoni kwihlabathi lemidlalo yevidiyo, iFortnite, usandula ukufika kwiNintendo's flagship console, iNintendo switch
Yiyo yonke into i-Square Enix eyibonisileyo ngexesha le-E3 2018
I-Kingdom Hearts 3 njengokubandakanywa kwabalinganiswa abavela kwiFrozen okanye kwiTangled, yeyona ilungileyo kwesi sishwankathelo kunye nento eboniswe yi-Square Enix kwi-E3 2018.
Esi sisishwankathelo sayo yonke into eboniswe nguMicrosoft kwi-E3 2018
IMicrosoft ifikelele kwisiphelo seeyure ezimbalwa ezidlulileyo kumnyhadala wevidiyo obaluleke kakhulu kwihlabathi, i-E3 2018. Sikuzisa isishwankathelo seendaba.
I-Bethesda yazisa ngo-Novemba 3 ukuwa kwe-76 yomhla wokukhutshwa e-E14
Umdlalo omtsha uza kubetha ezishelifini nge-14 kaNovemba. Esi sisiqinisekiso esisemthethweni ...
Zonke iindaba ezivela kwiFIFA: I-UEFA Champions League ilapha nokunye okuninzi
I-FIFA 19 sele ibhengeziwe buGcisa be-Elektroniki kumnyhadala wayo we-E3, umdlalo webhola ekhatywayo ngoku ubandakanya ilayisensi ye-UEFA Champions League.
UbuGcisa boMbane buqala imodeli entsha yobhaliso ngokufikelela kwimidlalo emitsha kwiintsuku ezi-5 ngaphambi kokumiliselwa kwayo. Imalunga neNkulumbuso yokuFikelela kweNkulumbuso
Imidlalo ye-Facebook: Iqonga elitsha lokudlala
Imidlalo ye-Facebook: Iqonga lokusasaza lokudlala. Fumana okunye malunga neqonga elenziwe yinethiwekhi yoluntu efuna ukumela iTwitch.
Umsebenzi wokwenza ubushushu kwi-E3 ngeendaba zeBashicootico N. Sane Trilogy
Kwaye i-E3 ikufutshane nekona kwaye ezinye zeefemu ezibaluleke kakhulu ziyaqala ...
I-Logitech yazisa imouse entsha kubadlali bebhola, iLogitech G305
Ukuba kukho inkampani eyaziyo indlela yokwenza iimpuku ezisemgangathweni kunye neebhodi yezitshixo kubadlali bebhola, le yiLogitech. Ngokucacileyo kwi ...
Enkosi kwii-headset ze-HP Mindframe, ukuchitha iiyure usebenzisa ii-headphone zethu ukudlala imidlalo okanye ukubukela iimovie akuyi kuba yingxaki ezindlebeni zethu.
I-Pokémon masihambe iPikachu kunye ne-Eevee, imidlalo yokuqala kuthotho lweTshintsho
I-Pokémon masihambe iPikachu kunye ne-Eevee: Imidlalo emitsha yeNintendo switch. Fumana ngakumbi malunga nemidlalo emitsha eza kwiConsole kamva kulo nyaka.
I-Pokémon Go iya kuhlaziywa kunye neAlolan Pokémon
Uhlaziyo olulandelayo olukhulu kumdlalo odumileyo wePokémon Go ye-smartphone iya kongeza iAlola Pokémon ehlotyeni. I-Niantic ...
I-Call of Duty Black Ops IIII iya kuba nemowudi ye-Battle Royale
Ushicilelo olulandelayo lweCall of Duty lijoyina ipati yedabi kwaye liza kubandakanya le ndlela ngaphakathi kwe-Black Ops IIII
I-Reuters kunye neNintendo zisandula ukupapasha iindaba zento eza kuba ngumdlalo wokuqala weNintendo kwizixhobo eziphathwayo ...
Imidlalo ene-Xbox yeGolide emangazayo nge-Metal Gear Solid V: i-Phantom Pain
Ngesi sihlandlo iMicrosoft ibheje kakhulu kwi-Metal Gear Solid: I-Phantom Pain, nangona kufanelekile ukuba ngumdlalo wevidiyo uSony asele ewanikile kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
UKonami uphulukana ne-Champions League kwi-PES, umdlalo wevidiyo wehla kwaye ungenazo iziqhoboshi
Intonga yokugqibela enokuthi ibonakalise ukubulawa kwePro Evolution Soccer kunye neKonami kwimidlalo yebhola ekhatywayo iya kuba kukupheliswa kwesivumelwano kunye ne-UEFA eqinisekisa iilayisensi zeChampinos League.
Ukuphononongwa kokuqala kukaThixo weMfazwe kulungile
Umatshini okhethekileyo wokushicilela ubeka uThixo weMfazwe njengomdlalo ogqwesileyo wonyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nokujonga ngokutsha komdlalo wePS4 ufumana kubagxeki.
Kwiveki ezayo unokuzikhuphelela iPUBG simahla kwiXbox One
Uyakwazi ukukhuphela i-PUBG simahla kwi-Xbox yakho enye kwiveki ezayo. Fumana ngakumbi malunga neli nyathelo eliza kukuvumela ukuba ukhuphele umdlalo odumileyo simahla.
I-Fortnite ye-iOS ifumana ngaphezulu kwe- $ 15 yezigidi kwingeniso
Ukuba kukho umdlalo omi ngaphandle kwi-iOS ngokungathandabuzekiyo Fortnite. Umdlalo okhuphisana ngokuchasene ...
I-Nintendo switchch iya kufumana ingqokelela yemidlalo ye-SNK
I-SNK isungula ingqokelela ekhethekileyo yomdlalo weNintendo switch. Fumana ngakumbi malunga noku kuqokelelwa kukhethekileyo kuza kubasebenzisi benkqubo yeNintendo oku kuwa.
I-Spyro Reignised Trilogy izakufika ngoSeptemba olandelayo kumaqonga ohlukeneyo: i-PS4 kunye neXbox One.Iyakwenza njalo ukubhiyozela isikhumbuzo sayo seminyaka engama-20 sokumiliselwa kwesihloko sokuqala.
I-ASUS iveza i-ROG Gladius II Imvelaphi, ejolise kubadlala umdlalo
Inkampani yaseTaiwan isandula ukwazisa ngokusesikweni isizukulwana sesithathu se-ROG Gladius, imouse enotshintsho oluguquguqukayo, isisombululo se-12.000 DPI, ebonakalayo kunye nesantya sokulandela i-250 DPI
Abaphuhlisi bavumile ukuba ngexesha lokuyilwa kwabo babeneengxoxo ezininzi malunga nemicimbi eyahlukeneyo enje ngokusondela kwekhamera.
Ukusinda eMars, thanga iMars kunye nabenzi beeDolophu: ISkylines
Ukuze siqeqeshe, iParadox Interactive isandula ukukhupha i-trailer yeSurviving Mars, isimulator ye-colonization ye-Mars, ulungele?
I-Tomb Raider trilogy iza kwi-Steam iphinde yenziwe kwakhona
Ivelufa ithembise ukuba i-trilogy yoqobo iza kuza kwi-Steam iphinde yenziwe kwakhona ukwanelisa umnqweno kaTom Raider wabadlali abaninzi.
Uyikhuphela njani kwaye uyifake njani iPUBG kuMdlalo weFowuni kwi-iOS
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abathembele kumdlalo wePUBG, ngoku sikubonisa ukuba uwukhuphele njani umdlalo kwi ...
Imidlalo yasimahla yePS Plus ukushiya iPS3 kunye nePS Vita kunyaka olandelayo
Nangona kunjalo, amaqonga amadala ePlayStation aya kuthi ndlelantle kwimidlalo yePS Plus eqala ngoMatshi kunyaka olandelayo.
I-Sonic yeHedgehog movie, ibetha iithiyetha ngasekupheleni kuka-2019
I-movie ye-Sonic yeHedgehog sele inomhla wokukhutshwa ocwangcisiweyo, owamiselwa okokuqala ngo-Novemba 15, 2019, unyaka omnye emva komhla ocwangcisiweyo wokuqala.
Itreyila entsha yeKingdom Hearts 3 isibonisa amakhwenkwe eMonsters SA
Okwangoku asinayo idatha ethile malunga nomhla wokukhutshwa komdlalo wevidiyo, esikubonileyo yitreyila entsha apho sinabadlali abaphambili beMonsters SA
URiME kunye noKnack babetha iPlayStation Plus ngoFebruwari
Kwimeko kaSony, babone kufanelekile ukubonelela ngeRiME kunye neKnack, imidlalo emibini yevidiyo enokuthi ithathelwe ingqalelo iphindwe kathathu-A apho banokuthi babambe abalandeli babo ngakumbi.
UFacebook uzibophelele ekusasazeni imidlalo yevidiyo
UFacebook naye uya kungena kwimidlalo yevidiyo. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani kunye nezizathu zokuba kutheni izakungena kweli candelo.
U-Thixo weMfazwe sele enawo umhla wokukhutshwa kwe-PlayStation 4
Besesibonile iividiyo ezininzi, besifuna kuphela ukwazi ukuba siza kuba nini ngokusemthethweni ezandleni zethu kwaye sele sazi.
Ubudala bemibuso: uHlelo oluqinisekileyo luyafika, isicwangciso kunye nostalgia ngobuninzi
Ubudala bemibuso: uHlelo olucacisiweyo ngoku lukulungele ukufikelela kwii-PC zethu, siza kwazi ngakumbi nzulu ukuba oku kuphakamisa ubuso kubalulekile kuya kubandakanya ntoni.
IFantasy XV yokugqibela yePC sele inomhla wokukhutshwa kunye neenkcukacha
Isikwere i-Enix ibone kufanelekile ukuba inike umhla wokukhutshwa kulo mdlalo wevidiyo kunye nokuhamba kunye nayo iyakuba yeyiphi eyona nto iyimfuneko.
Imiphefumlo Emnyama ibuyisiwe, isavenge sokuqala sifikelela phantse kuwo onke amaqonga kwi-HD
Imiphefumlo emnyama iya kufikelela kumaqonga aliqela xa iphinde yaphinda yavuselelwa, into abanokuthi bayincoma kuphela.
Ukuseta i-NVIDIA kubadlali be-65-intshi esweni kunye nesisombululo se-4k kunye nenqanaba lokuhlaziya le-120Hz
Umvelisi wekhadi lemizobo iNVIDIA ivelise i-CES esweni i-intshi ezingama-65, ngesisombululo se-4k, i-HDR, inqanaba lokuhlaziya le-120 Hz nangaphantsi kwe-ms latency.
Intengiso kaJanuwari ngoku iyafumaneka kwiVenkile yePlayStation
U-Sony owazi okuninzi malunga noku ugqibe kwelokuba asebenzise ithuba lethu lobuthathaka ukumilisela izibonelelo ukuya kuthi ga kwi-60% isaphulelo kwiVenkile ye-PlayStation
Intengiso yasebusika yomphunga ilapha!
Umhla wesaphulelo somdlalo weqonga lomdlalo ufikile ngokusemthethweni. Njengonyaka wonke ngexesha lonyaka ...
ICapcom ibhiyozela i-30 ye-Street Fighter ngokukhupha ingqokelela epheleleyo
Ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-30 sokuphehlelelwa kwe-Street Fighter, abafana baseCapcom baya kudibanisa kwipakethi enye, zonke iinguqulelo ze-arcade ezikhutshiweyo
Iqela laseMcLaren Formula 1 liqeshe umdlali weqonga njengomqhubi osemthethweni wesimulator
Oku kusikhumbuza "umntwana, uyeke ukuchitha ixesha ngomatshini omncinci kwaye wenze into eluncedo" ethi ...
USony uphehlelela izivumelwano ezimnyama zangoLwesihlanu oMnyama
Izibonelelo ezibonakalayo zoLwesihlanu oMnyama eziza kukushiya uvule umlomo, phakathi kwezinye iGran Turismo Sport ifumene ama-50%
I-PlayStation Plus iya kuba simahla kwiintsuku ezintlanu eYurophu
AbakwaSony banikezela ngenkonzo yePlayStation Plus kangangeentsuku ezintlanu kubo bonke abasebenzisi bayo baseYurophu ukuze baxhamle kwizibonelelo zayo.
Imithetho ye-EA yokubuya emva kweMidlalo yeeMfazwe zeNkanyezi: Kwidabi II
Kubonakala ngathi i-EA ekugqibeleni inikezela kuxinzelelo kwaye ibhengeze emva kweeyure ezimbalwa zokudideka kwinethiwekhi ukunciphisa ...
INintendo iceba ukwenza ngaphezulu kwesigidi se-30 sokutshintsha kweNintendo kunyaka olandelayo
INintendo ifuna ukwandisa inani lezixhobo zokwenza imveliso kunyaka olandelayo, ukwandisa imveliso iye kwiiyunithi ezingama-30 ezigidi.
Isony kunye nenkqubo yayo yemivuzo yabadlali bePlayStation 4 abanamanqaku kwaye baya kuvuzwa ...
IIMPAWU ZONYAKA ZAMABHODALA AYAFIKA NGOLWESINE
NgoLwesine olandelayo sizakufumana imivuzo yokuqala yenyanga yeFUT Champions, uyafuna ukwazi ukuba ngawaphi amabhaso angawakho?
Final Fantasy XV Iimfuno zePC ziVuziwe
I-Final Fantasy XV sisihloko esilindelwe kakhulu sePC, kwaye sele siyazi ukuba kuya kufuneka uyilungiselele njani iPC yakho ukuba ufuna ukufumana okungcono kuyo.
Indawo yokuwela izilwanyana epokothweni Inkampu ligama lenguqulelo yokuwela kwezilwanyana kwizixhobo eziphathwayo eziza kufika ekupheleni kukaNovemba
Ukutshatyalaliswa kwe-2 kusokola ukwehla ngokukhohlakeleyo kubasebenzisi bekhonsoli
Ngayo loo mini yaphehlelelwa iPC sifunde ukuba iDestiny 2 iye yafumana ubunzima kubasebenzisi
UModder Tim Lindquist wenze i-Nintendo switch eyenziweyo esekwe kwiRaspberry Pi 3: i-NinTIMdo RP. Apha uya kufumana yonke into yokuzakhela
URazer Kiyo, ikhamera enokukhanya okwakhelweyo 'kwee-streamers'
Abasasazi ngoku banekhamera entsha yewebhu ukusasaza ngezibane zesiko. Le yiRazer Kiyo kunye nendandatho yayo ye-LED
Makhe sibone ukuba zeziphi izinto ezintathu zolawulo ezifikayo kwi-PlayStation ezine ukuqala ngo-Novemba olandelayo.
Ukuba ucinga ukulungisa indawo yakho yokudlala, namhlanje sikunika uthotho lweengcebiso ezifanelekileyo zokusetha idesika ekhethekileyo yokudlala
Kudala sivavanya idemo yeGran Turismo Sport ethi iqela lakwaSony libonelele ngesisa kubo bonke abasebenzisi bayo
Jonga le Pokéball intle ekwaziyo ukugcina zonke iicartridge zakho zeNintendo, ungazithutha kwaye uzikhusele kuyo.
Le demo kuphela kwento u-Sony ayilungiselele abathandi boluthotho kule veki, kukho enye into ekufuneka uyazi njengoluhlu lweemoto.
INintendo iqinisekisile ukuba nge-31 kaJanuwari 2019 Ivenkile ye-Wii izakuyeka ukusebenza ngonaphakade, iyeke ukuxhasa ezi zinto ziduduzayo
Sasingazi ukuba uManolo Lama, umsasazi odumileyo kunye nomsasazi wohlelo malunga neminyaka engamashumi amabini, wayeza kubaleka.
I-Commodore 64, ikhompyuter yasentsomini yee-80s, ibuyela ebomini kwifomathi encinci kunye nexabiso lama-euro angama-80
Yahluke njani iPlayStation 4 Pro kunye neXbox One X
Ngaba uyawazi umohluko phakathi kweXbox One X kunye nePlayStation 4 Pro? Ngena kwaye ufumane ukuba yeyiphi engcono kwezi zimbini.
Intshabalalo yeNintendo switch kunye neMinecraft yeNintendo 3DS: iindaba eziphambili zeNintendo Direct
KwiNintendo Direct, inkampani yaseJapan isibonakalisile yonke imidlalo emitsha eza kufika kwiinyanga ezizayo kwi-3DS kunye noTshintsho.
Idemo yeFIFA 18 ngoku iyafumaneka kwiVenkile yePlayStation
Ungayikhuphela simahla ngaphandle kwentlawulo ukusukela ngoku kwaye ukonwabele imo yayo yokubonisa ukwenza ukungcamla kokuqala.
I-NES Classic iye yaba yinto yokuqokelela izinto ezandleni zabasebenzisi abambalwa ...
I-LA Noire ibuyela kwi-PS4, i-Xbox One kunye noTshintsho ngo-Novemba
I-LA Noire izakufika kuninzi lweqonga lomdlalo wevidiyo ngenyanga ka-Novemba, ngakumbi ngomhla we-14.
Umsebenzi oqaliswe izolo ukuthengisa enye ye-FPS erhuqe abalandeli abaninzi kule minyaka idlulileyo, iDestiny 2 ifika kwiPS4 nakwiXbox One.
Inkampani yaseJapan iNintendo ibutshintshile ubuchwephesha bukaMario kwiwebhusayithi yayo, iyekile ukuba yiplamba phantse kwiminyaka engama-40 kamva.
I-Razer eqinileyo ivelise i-Basilisk, imouse edibanisa i-trigger eya kusivumela ukuba sonwabe ngokupheleleyo kwi-FPS
I-Samsung CHG90, i-49-intshi yokubeka iliso 'kwimidlalo' ngetekhnoloji yeQLED
Isamsung ibikhona eJamani ngexesha leMidlalo yeMidlalo kwaye ibonise i-intshi yayo engama-90 ye-Samsung CHG49 yokujonga umdlalo
I-trailer kaShenmue III iyaphoxa isibini
Ukungabikho komgangatho wegraphic kunye nokucacisa kwamalungu erhuqwayo kunike kakhulu ukuba uthethe ... uyafuna ukuyibona?
Sikubonisa i-trailer yokuqala ye-Age of Empire IV
Ngokuchasene nazo zonke iingxaki, abafana baseMicrosoft babonisa nje i-trailer yokuqala ye-Age of Empires IV
Le trailer ye4K ibhengeza ukuGqibela kweFantasy XV yePC
Sifunde ngexesha leMidlalo kwiNvidia ukuba iFinal Fantasy XV iza kuza kwiPC inempawu ezintle
Njengoko kubonisiwe eTurtle Beach, i-PlayStation 4 Slim kunye ne-Xbox One S zinokubonelela ngamaxabiso ancitshisiweyo ngokuphela konyaka
USony usinika iinyanga ezingaphantsi kweshumi elinesihlanu zePlayStation Plus ngexabiso leenyanga ezilishumi elinambini, ixesha elilungileyo lokugcina ngaphambi kokuba benyuke.
I-Bethesda iya kubonelela nge-Fallout 4 njengoMdlalo wonyaka kwinguqu yayo epheleleyo, nayo yonke iDLC ekhoyo ngeli xesha ngoSeptemba 26.
Makhe sijonge lo myalelo kunye nolunye ushicilelo olukhethekileyo u-Sony azimisele ngalo ukulawula yonke imizi ngale nyanga ka-Agasti.
UMario + Rabbids Kingdom Battle akazukubonelela ngesisombululo se-FullHD
UMario + Rabbids Kingdom Battle, umdlalo apho isisombululo siza kuba sincinci, asiyi kudlula kwi-900p.
ICrash Bandicoot N´Sane Trilogy iye yaba yiPlayStation 4 ekhethekileyo nenani elide leeveki kwinombolo 1 e-UK.
USony unyusa amaxabiso ePlayStation Plus kwaye uluntu luyacaphuka
Siza kuvavanya amaxabiso amatsha ePlayStation Plus athe abangela ukungonwabi kuluntu olukhulu lwekhonsoli.
I-Sega zakudala zibethe iivenkile ezikwi-SEGA Ngonaphakade simahla
Inkampani yaseJapan i-SEGA isandula ukusungula imidlalo yokuqala yeklasi yokuthuthuzela kwiivenkile zeapp
U-Sony uxelwe ukuba wenqabile ukuthatha inxaxheba kumdlalo wabadlali abaninzi kunye nabadlali abaninzi abakhuthaza iMicrosoft kumdlalo weMinecraft.
Le yiphedi yemouse yeLogitech ebiza imouse ngelixa uyisebenzisa
ILogitech isungule iphedi yemouse ekwazi ukutshajisa imouse yakho ngaphandle kwamacingo ngexesha elifanayo oyisebenzisayo ... uyafuna ukuyazi?
Konke oku kuzisiwe yiNintendo kwinkomfa yayo ye-E3
Siza kwenza isishwankathelo esincinci sezinto abasinike zona phezolo kumsitho wabo okwi-Intanethi, asinakho ukuwutyeshela umsebenzi omkhulu owenziwa nguNintendo.
Yonke le yimidlalo emitsha ebhengezwe yiSony PlayStation kwi-E3 2017
Ukuba ufuna ukwazi yonke imidlalo emitsha ebhengezwe yiSony PlayStation ngexesha le-E3 2017, awuzukuyiphosa le posi ilayishwe ziitreyila.
Imvelaphi ka-Asassin yeCreed kunye ne-Far Cry 5 kwinkomfa ye-Ubisoft ye-E3 2017
Ubisoft uthathe ithuba lokusazisa ngemidlalo ethile esingayaziyo njenge-Crew II, kwaye unike iinkcukacha ezithe kratya malunga ne-Asassin's Creed Origins kunye neFar Cry 5.
Yonke into enikwe yinkomfa yoBugcisa be-Elektroniki e-E3 2017
Siza kunika amagqabantshintshi ngobuGcisa be-elektroniki obulungiselele intsalela yowama-2017 nendlela ezimisele ukuqala ngayo ngowama-2018.
Le yimidlalo yePlayStation Plus kunye neXbox Live yeGolide kaJuni 2017
Vula amehlo akho ngokubanzi kuba le yimidlalo yasimahla eza kuthi ngoJuni ye-PlayStation Plus kunye ne-Xbox Live Gold.
IPokéland ngumdlalo omtsha oza kufika kulo nyaka kubasebenzisi bezixhobo zeselfowuni kunye nenkqubo yokusebenza ...
Ukuseta njani ulawulo lwabazali kwiNintendo switch
Sikuzisa isifundo esinomdla kakhulu kwindlela yokuqwalasela ulawulo lwabazali kwiNintendo switch.
Usadlala iPokémon GO? Uhlaziyo olulandelayo luya kongeza i-Legendary Pokémon
Umdlalo wePokémon GO kwizixhobo eziphathwayo ube yimpumelelo yokwenyani yeNiantic neNintendo, ababone ukuba lo mdlalo ...
Ngamana izaphulelo kwiVenkile yePlayStation ziyakuthatha umphefumlo wakho
Njengoko usazi kakuhle, abafana abavela kwaSony PlayStation banobubele ngokwaneleyo bokumisela ukubonelela ngejusi kwimidlalo yevidiyo yedijithali ngoku ...
Umdlalo uZelda uya kuba kungekudala kwizixhobo eziphathwayo
Kubonakala ngathi uNintendo ulungiselela iminyaka embalwa elandelayo uthotho lwemidlalo enokubangela isiphithiphithi ...
Yeyiphi i-emulator efanelekileyo yePlayStation 2?
Yeyiphi i-emulator efanelekileyo yePS2? Hlala nathi kwaye uza kubona ukuba yeyiphi eyona inomdla kwezi zixhobo kunye nendlela yokuyiqwalasela.
Ukubonelelwa nge-Ista kufika kwivenkile ye PlayStation kwaye zezi
USony ulungiselele umlo olungileyo wezihloko ngentengiso yePasika efumanekayo ukusukela ngoku kwiVenkile yePlayStation yazo zonke induduzo zabo.
Umnxeba woXanduva ubuyela kwimvelaphi, kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi
Umnxeba woXanduva uya kubuyela kwimvelaphi, iMfazwe yesibini (II) yeHlabathi iya kuba ngumlo womdlalo olandelayo kwi-saga.
IGameStop iya kuvala ngaphezulu kwevenkile ezili-100 kwihlabathi liphela
Ukuthengiswa kwedijithali kukwanesiphumo kubathengisi bemidlalo yevidiyo, kunye nokuGqibela kweStop ukuvala ngaphezulu kwevenkile ezili-100 kungekudala.
Ukuhlaselwa kwentliziyo kubonelela ngoku kwiVenkile yePlayStation
USony wenze ukhetho lweyona midlalo ibaluleke kakhulu yePlayStation okwangoku.
UZelda: Ukuphefumla kwendalo sele kuqhuba kakuhle kwiPC
Sijongene naleyo ngokutsho kwabagxeki, kwaye ngaphandle kokuba yiNintendo ekhethekileyo, inokuba ...
Umxholo okhethekileyo kwiMfazwe yangoku: wenziwe kwakhona ngoSuku lukaPatrick
Umnyhadala esibhekisa kuwo uqale ngoLwesine odlulileyo kwaye uza kuhlala, ngokutsho kwenkampani yonjiniyela, iiveki ezintathu.
I-LA Noire izakufika iphinde ibuyiselwe kwisizukulwana sokugqibela seengcebiso
I-LA Noire, le klasiki inokufikelela kwisizukulwana sokugqibela soomnyango ngomnyango omkhulu kunye nexabiso elinomtsalane.
Ngoku iyafumaneka kwi-iOS kunye ne-Android umdlalo weklasikhi: Ghost and Goblins
Kwaye yile ntsasa kanye lo mdlalo wasentsomini weGhost neGoblins usungulwe ngokusesikweni ...
Ububi boMhlali: Izityhilelo eziqinisekisiweyo zePlayStation 4 kunye neXbox One
Umhlali Evil, i-saga ethe yabakhanyisela abadlali bayo njengangaphambili emva kwenguqulelo yamva nje, kwaye oko kusizisela ukuvuseleleka kwakhona.
I-Rocket League ihlaziywa ngemowudi yomdlalo omtsha
Ukulahla kujolise ekuqhubekekeni nabadlali abakhazimlayo imihla ngemihla, ukufumanisa ukuba yeyiphi imowudi yomdlalo omtsha enathi.
Igqala likaCapcom lika-1942 lomdlalo liza kwizixhobo ze-Android
Kule veki iphelileyo lo mdlalo ubizwa ngokuba yi-1942 Mobile usungulwe kubasebenzisi be-iOS, oza kuba ...
Impumelelo yombutho kwiiforamu zokudlala idabi lokulwa 1
Ukukhula kothotho lweepatroli kwiiforum zesizwe kuyamangalisa, oko ke kunika isiqinisekiso sempumelelo kwimidlalo yabadlali abaninzi.
Sibona imizuzu engama-30 yokudlala umdlalo weMpembelelo zeMisa: Andromeda
Namhlanje into esinokuyibona ayikho ngaphantsi kwemizuzu engamashumi amathathu yomdlalo we-Mass Effect: Andromeda, umdlalo olandelayo kule saga.
Lo ngumxholo okhethekileyo kaMario Kart 8 Deluxe weNintendo switch
Ezi ziindaba zokuba iSuper Mario Kart Deluxe ibandakanya iNintendo Shintsha ongayi kuyifumana kuhlobo lwangaphambili.
Ezi zezizaphulelo ezinomdla kwivenkile yePS, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70
Makhe sijonge kancinci kubunzulu yeyiphi imidlalo esifumana kwiVenkile yePlayStation ngezaphulelo eziphindwe kabini kwiveki.
Ukubeka izitikha kwiNintendo switch yakho kungonakalisa iplastiki yayo
Sifuna ukwazisa isindululo kubo bonke abanini bale khonsoli yotshintsho: Musa ukubeka iivinyl okanye izitikha kuyo,
Ivenkile yokutshintsha kwidijithali iya kudityaniswa neakhawunti yakho yeNintendo
Ngokwokuvuza kwamva nje, iNintendo Shintsha iya kuba nevenkile yedijithali eneempawu ezifanayo nezabanye abakhuphisana nabo.
Emva kweenyanga ezintathu nge-Classic Mini NES, ngaba kufanelekile?
Sijonge ngasemva, siyakhumbula ukuba sihlawule ii-euro ezingama-59,99 kwaye ngoku sithi, kufanelekile? Hlala nathi ndikunike uluvo lwam.
Iindaba zamva nje kukuba uZelda: Ukuphefumla kwendalo akukabikho kwimarike kwaye sele inee-DLC ezingama-20.
I-Pokémon Yiya kuhlaziyo lomdlalo oluzayo kamva kule veki
Izolo sithethe ngeendaba eziza nohlobo olutsha lomdlalo wePokémon Go oza kuzizisa izixhobo zefowuni kunye ...
Ukutshintshiselana ngePokémon kunye nomlo wexesha lokwenyani kungekudala kuzakufika kwiPokémon Go
Iiveki ezimbalwa zidlulile okoko iindaba zokugqibela zibhalwe kwiGadget News malunga nomdlalo wePokémon Go, ukuba ...
I-Xbox One inokuba nemouse kunye nenkxaso yekhibhodi kungekudala
Kubonakala ngathi ayizukuthatha thuba lide ngaphambi kokuba iXbox One ifumane inkxaso ukuze ikwazi ukudibanisa imouse yangaphandle kunye nekhibhodi
Ubizo lomsebenzi: Imfazwe engapheliyo 'iSabotage' i-DLC ekugqibeleni ifika kwi-PlayStation 4
Ubizo lomsebenzi: Imfazwe engapheliyo iyaqhubeka nokufumana uhlaziyo kunye nee-DLC ezintsha njengoko iintsuku zihamba.
I-Rainbox yesithandathu: Ukuvinjelwa kuya kukhululeka kule mpelaveki izayo
Ibhokisi yemvula yesithandathu: Ukungqingwa, i-MPFPS emnandi etsala abadlali abaninzi kwihlabathi liphela kwaye sele bekhululekile kule mpelaveki ingaqhelekanga
INintendo ivelise i-53 yezigidi zeedola ngeSuper Mario Run
Ngaphandle kwempumelelo yokuqala yeSuper Mario Run, inkampani yaseJapan ibanga ukuba ivelise kuphela i-53 yezigidi zeedola ngokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Xa sithetha ngemigaqo ye-arcade games, izihloko ezininzi zithi qatha engqondweni, kodwa ...
Umsebenzi we-Square Enix kunye neMarvel kumdlalo wevidiyo weAvengers
Inkampani yaseJapan kunye neMarvel basebenza njengeqela ukuvelisa umdlalo wevidiyo ngokusekwe kwiAvengers.
IMicrosoft ishiye iMinecraft Windows 10 Iselfowuni
IMicrosoft icwangcisa ukushiya uphuhliso lweMinecraft kunye nohlaziyo Windows 10 Iselfowuni
Ngoku ungathenga iNVIDIA Shield TV entsha eSpain
INVIDIA Shield entsha ichazwa njengenkomo yokusasaza ngokunika umsebenzisi amandla okudlala umxholo wevidiyo ye-4K HDR ...
Olu luluhlu lwemidlalo eqinisekisiweyo yeNintendo switch
Siya apho nayo yonke imidlalo yevidiyo eqinisekiswe ngabaphuhlisi abaza kufika kwiNintendo Shintsha kungekudala.
Izolo eminye imidlalo kunye nezixhobo zanamhlanje zeNintendo switch
Kuncinci kakhulu okuseleyo ukufumanisa ngokusesikweni ikhonsoli yeNintendo entsha, iSwitshi. Ngeli xesha, ezahlukeneyo ...
NgoLwesihlanu olandelayo siza kudibana neNintendo switch kwaye le yimidlalo esele iqinisekisiwe
Namhlanje sikubonisa imidlalo esele iqinisekisiwe ngeNintendo switch entsha ezakwenziwa ngokusemthethweni ngolwesiHlanu olandelayo.
I-PlayStation 4 ibe sisipho sephulo leKrisimesi
Ikhonsoli yohlobo lwaseJapan ithengise ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezintandathu ngeli phulo leKrisimesi, eshiye wonke umntu engathethi.
Ngoku ungongeza eminye imidlalo nge-USB kwiNintendo Classic Mini NES
Abahlaseli baseRussia nabaseJapan bakwazile ukufaka eminye imidlalo engama-25 kwiNintendo Classic Mini ngokudibanisa kwe-microUSB.
ISpace Marshals 2 ithengiswa ixesha elinomda kubasebenzisi be-iOS
Sele kuyinto eqhelekileyo ukuba xa uhlaziyo lwesicelo lwenziwa kwiVenkile ye App ...
I-Minecraft ifikelela kwisizukulwana se-4 sabasebenzisi be-Apple TV
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sibhengeze ukufika kwalo mdlalo kubasebenzisi beApple TV ...
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Indawo yokulwa kunye neGTA V ngamaxabiso amangalisayo kwiVenkile yePS
Izibonelelo zezi ntsuku zimbini zidlula kwi-Star Wars: Idabi lokulwa kunye neGrand Theft Auto V, nge- € 15 kunye ne- € 30 ngokwahlukeneyo.
Ngaphezulu kwe-500.000 yeNintendo Classic Mini NES Qinisekisa impumelelo
I-Nintendo ihamba ngaphezu kwe-500.000 yeNintendo Classic Mini ithengiswe ngexesha elifutshane, isenza i-console enjalo ukuba ibe yimpumelelo engazange ibonwe.
Umnxeba woXanduva: Imfazwe yanamhlanje ehlaziyiweyo ifumana uhlaziyo olukhulu
Sijongene nohlaziyo olukhulu esinokucinga ngalo, mhlawumbi yenye yezona zinkulu kwezakha zabonwa kwiCall of Duty.
Uhlaziyo lweXbox lwenza ukhuphelo lukhawuleze kwiNye
Olu hlaziyo lwenkqubo yokusebenza yeXbox One luthembisa ukwenza ukhuphelo ngokukhawuleza okukhulu kunxibelelwano lwenethiwekhi elungileyo.
Umdlalo weSuper Mario Run ngoku uyafumaneka kwiVenkile ye App
Baninzi abasebenzisi ababelinde lo mzuzu kwaye kubonakala ngathi umzuzu ufikile xa ...
I-BioShock iya kwi-retro ehambelanayo kwi-Xbox enye kunye neendaba zasimahla
Iimfazwe zeNkwenkwezi: Indawo yokulwa sele isimahla kubasebenzisi beXbox One nge-EA Access, kwaye uthotho lweBioShock lubuyela umva iyahambelana.
I-RetroEngine Sigma, ikhonsoli ye-retro yokubalawula bonke
Siza kuthathela ingqalelo iRetroEngine Sigma, ikhonsoli onokonwaba ngayo ngezihloko ezivela kwi-NEO-GEO ukuya kwi-PlayStation.
Umdlalo osemthethweni weF1 2016 ngoku uyafumaneka kwi-Android
IFomula enye kulo nyaka ekugqibeleni ifikelela kubasebenzisi be-Android. Kule meko…
IMicrosoft yehlise amaxabiso ekhonsoli yayo yeXbox One ukujikisa sonke isitokhwe kwaye ijolise kwiXbox One S.
I-Pokémon Sol kunye neLuna batyhala ukuthengiswa kweNintendo 3DS ngama-361%
Ukuthengiswa kweNintendo 3DS kukhule ngama-361% okoko kwasungulwa umdlalo wokugqibela kwiPokémon franchise, uhlelo lweLanga neNyanga.
"NgoLwesihlanu oMnyama" iya kuhlala kude kube ngoMvulo kwiVenkile yePlayStation [INIKEZO]
Siza kukubonisa ukuba zeziphi ezona zibonelelo zibalaseleyo kwimidlalo yevidiyo yedijithali kwiVenkile yePlayStation ukuze ube nexesha elimnandi nezi zihloko.
Ngoku "ungathenga" i-Nintendo switch ye-236 euro
Ivenkile yaseBritane sele iqalile ukubonelela ngentengiso yangaphambi kokuthengiswa kweNintendo switch yeepawundi ezili-198, malunga nee-euro ezingama-236 zokutshintsha.
Ikhadi eliyintsomi iSolitaire lisimahla ngokupheleleyo kwi-Android kunye ne-iOS
Lo ngomnye wemidlalo yokuqala abasebenzisi abaninzi abayaziyo kwinkqubo yokusebenza yeWindows kwaye ngoku iyafumaneka ...
I-PlayStation yandisa imidlalo ekhoyo ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70
Ivenkile yePS ziiveki ezimbalwa ngaphambi koLwesihlanu oMnyama, enikezela ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 kwizihloko ezininzi zedijithali zePlayStation 4.
Amathoyizi ´R Ngempazamo silicoca ixabiso lokutshintsha kweNintendo
Inkxaso-mali yaseCanada Toys ´R Us ngempazamo ivuza ixabiso lokugqibela lekhonsoli yeNintendo entsha kwiwebhusayithi yayo.
I-PlayStation 4 Pro inokuba yeyona console ilula ukuyilungisa
Abafana kwi-iFixit basinika iindaba ezimnandi, i-console ye-Sony ifumene i-8 ngaphandle kwe-10 malunga nokulungiswa kwezinto zayo
Ikhonsoli ye-Wii U igwetyelwe ukufa
Le yindlela ecace gca necacileyo ngayo imixholo ephambili yeendaba kwaye sisibhengezo ...
Namhlanje, ngo-Novemba ngo-10, i-PlayStation 4 Pro iyathengiswa kuwo onke amanqaku aqhelekileyo, masilinganise ukulunga kwayo kunye nokubi.
Imidlalo emithathu enexabiso eliphantsi kunye nostalgic yokuxhoma kunye nayo
Umxholo weSibhedlele, iPaki yoMxholo kunye noWedwa ebumnyameni, ungaphoswa yingqokelela yemidlalo ye-retro ukuze ube nexesha elimnandi.
Le yimidlalo yenyanga yePlayStation Plus kunye neXbox Gold ngoNovemba
Hlala ukuba ufuna ukwazi kwakhona ukuba zeziphi mahala i-Xbox Gold kunye ne-PlayStation Plus imidlalo yale nyanga ka-Novemba.
«Abadlala umdlalo» bakhetha ifomathi ebonakalayo, ezi zizizathu zabo
Ngokophando lwakutsha nje, i-gamer kawonkewonke ikhetha ifomathi yomzimba, ii-discs iseyinto eyintandokazi kubadlali bepropathi
Smach Z, i-PC Gamer epheleleyo ezintendeni zezandla zakho
Imach Z ijolise ukuzisa izibonelelo zeStam kunye nomdlalo wevidiyo kwiqonga lePC, entendeni yezandla zethu, ikamva lekhonsoli ephathekayo.
INintendo Classic Mini, sivavanye iNintendo mini console
Sivavanye iNintendo Classic Mini NES, ikhonsoli entsha yedesktop yeNintendo eya kusivumela ukuba sidlale imidlalo engama-30 yekhonsoli yayo yomfuziselo
I-Sony PlayStation ilungiselela imidlalo yevidiyo emi-6 yezixhobo eziphathwayo
Eli candelo litsha leSony Entertainment lijolise ekudaleni imidlalo yevidiyo eqinisekileyo ukuba ikumgangatho ophezulu.
I-Steam yongeza inkxaso yemveli kumlawuli wePS4, iDualShock 4
I-Steam ithathe inkunzi yenkomo ngeempondo kwaye igqibe kwelokuba yongeze inkxaso yemveli kumlawuli we-PlayStation 4 ohambelana ne-API yayo.
Iimfazwe zeNkwenkwezi: I-Old Republic i-trailer iya kuvuthela ingqondo yakho
Namhlanje sikuzisa i-trailer ye-Star Wars: IRiphabhlikhi yakudala kunye nokwandiswa kwayo kweeKnights zeTrone engunaphakade, umboniso obonakalayo ngaphandle kokulingana.
Ulwazi malunga nokuvuza okutsha kweNintendo NX
Sikubonisa ezinye zeenkcukacha apho ikhonsoli entsha ye-Nintendo firm yaseNintendo, iNintendo NX, iya kuthi ifike kwimarike
I-GTA 5 isivumela ukuba sitshintshe iibhombu ze-Samsung Galaxy Note 7
Enkosi kwiimods, abasebenzisi banokusebenzisa i-Galaxy Note 7 njengeebhombu okanye iziqhushumbisi kwiGrand Theft Auto 5
Umphathi we-Ubisoft ukholelwa ukuba iNintendo NX iya kuphila ngokugqwesileyo
Umphathi omkhulu we-Ubisoft ukhuphe uthotho lweengxelo eziguqule umhlaba wevidiyo kule mihla, ethetha ngeNintendo NX.
Isibhengezo esitsha sohlelo lweNES Classic
I-Nintendo yaseJapan isanda kukhupha intengiso entsha apho isibonisa khona ukuba uHlelo lweNES Classic luya kusebenza njani
I-Famicom Mini yinguqulelo yaseJapan yeNES Classic
AmaJapan ngekhe ashiyeke ngaphandle kwenguqulelo yawo yeClass Mini, i-Famicom Mini iya kuba yinguqulelo yaseJapan yeNES Mini Mini.
Umhlali wobubi kunye nabaGuquli: Ukutshabalalisa simahla ngo-Okthobha ngePlayStation Plus
U-Sony uthathe isigqibo sokushiya imidlalo emibini ngokulandelelana kwemini ye-PlayStation 4, kule meko bubi babahlali kunye nabaguquli: Ukutshabalalisa
Idabi lokulwa 1 lihlaziya itreyila entsha kunye nedatha engaphezulu
Umdlalo uya kukhutshwa ngo-Okthobha u-21 we-Xbox One, i-PC kunye ne-PlayStation 4 kunye ne-EA evula imilomo yethu ngetreyila yendlela yebali.
Impucuko VI iya kufuna amandla ngakumbi kunokuba bekulindelwe kwi-PC
Ngokungafaniyo nabanye abanjengoSims, kwimeko yempucuko VI mhlawumbi siya kuzifumana sineemfuno zekhompyuter ngakumbi kunokuba silindele.
Iprojekthi yeScorpio ayizukuqhatha kwaye iya kubonelela ngezigqibo ze4K natively
Iprojekthi yeScorpio ayizukukhohlisa abasebenzisi bayo, ubuncinci yile nto ithethwa ngabaphathi bayo kwaye iya kubonelela ngesisombululo se-4K ngokwendalo kwasekuqaleni ...
AbakwaSony bayavuma ukuphathwa gwenxa kweshishini kwi "No Sky's Man"
Kudliwanondlebe lwe-Eurogamer kubonakala ngathi elinye lamagosa aphezulu akwaSony licula i-mea culpa malunga ne-No Man's Sky kunye nokungalungisi konjiniyela wayo.
Ukusinda kweMetar Gear, eyokuqala ukusuka kwixesha le-post-Kojima eliphakamise imiphetho emibi
Ukusinda kweMetar Gear kubangela umsindo wabathandi be-saga ngomxholo wayo kunye neendlela ezahlukeneyo zokungena kunye nokudlala umdlalo.
Abasebenzisi bePokémon Go abasebenzayo behla nge-80%
Inani labasebenzisi bePokémon Go lehle ngendlela eyoyikisayo, unciphiso olusilumkisa ngelahleko ezinkulu nangona umvuzo uphezulu ...
Iipatches kwimidlalo yePS4 Pro aziyi kuba nazindleko zongezelelweyo
Iinkampani zonjiniyela ziya kuhlaziya imidlalo yazo yevidiyo ngenjongo yokwenza eyona misebenzi yePS4 Pro isimahla.
Kuya kubakho ukuwa kwe4 kunye neemodyuli zeSkyrim zeXbox One
Sikwazisa ukuba ngokutsho kweBethesda, iSkyrim kunye neFallout 4 kuhlobo lwayo lwePlayStation 4 abayi kufumana mods ngalo mzuzu, ngenxa yokwala kukaSony.
Uluhlu olubanzi lwemidlalo engaphantsi kwe- $ 20 kwiVenkile yePlayStation
Sifuna ukukuzisa uluhlu oluhle lweyona midlalo inomdla engaphantsi kwee- € 20 esinokuyifumana kule veki kwiVenkile yePlayStation
I-PlayStation 4 encinci, icekeceke kwaye isitayile ngakumbi. Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa
I-PS4 Slim nayo ifike izolo, inguqulelo ehlaziyiweyo kunye ne-stylized ye-Original PlayStation 4 kodwa ngaphandle kwemisebenzi eyongezelelweyo.
Le yiPlayStation 4 Pro, isisombululo se-4K kunye nemisebenzi ye-HDR
Akukho marhe malunga negama kunye namandla, i-PlayStation 4 Pro ilapha, ezi zizinto ezinokubakho.
I-PSVita backups ngoku ziyinyani ngenxa yeVitamin
I-PSVita backups ngoku ziyinyani ngenxa yeVitamin, isixhobo esitsha esikuvumela ukuba ulayishe imidlalo kwimemori yekhonsoli.
I-PlayStation 4.0 i-firmware ihlaziya i-4 ngokweenkcukacha
Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo u-Sony uza kubhengeza ukufika kwe-PlayStation 4 Slim kwaye uza kukhupha umhla we-firmware 4.0 ye-PlayStation.
Ukusebenza kukhuphe kwezi ntsuku ividiyo ethile enxulumene nemowudi yabadlali abaninzi (eyona ibalulekileyo) yayo Call of Duty: Imfazwe engapheliyo.
Uhambo kunye neeNkosi zeFallen simahla ngePlayStation Plus ngoSeptemba
Uhambo kunye neeNkosi ze-Fallen zifike simahla ngePlayStation Plus ngoSeptemba, ungaphoswa ziindaba zokubhaliselwa.
INintendo iyavuma ukusilela kwayo ngeWii U; kodwa abasayi kuphinda
INintendo ibanga ukuba ididekile ne-Wii U kodwa ayizukuphinda iimpazamo ezifanayo neNintendo Wii U kwiNintendo NX elandelayo okanye ngoku kuthiwa ...
UMicrosoft uqala ukucebisa ukuba iProjekthi iScorpio iya kuba yimveliso ebiza kakhulu
Ukuthatha ithuba lokubhiyozela iMidlalocon, uMicrosoft uthathe ithuba lokuthetha ngeProjekithi yeScorpio kunye nexabiso layo eliphezulu xa ingena kwintengiso.
I-PlayStation 4 Slim ineendaba ezininzi, utshintsho kwi-DualShock 4
I-DualShock 4 ihlaziyiwe kwaye ngoku ikuvumela ukuba ubone i-LED enemibala evela kwiTouchpad ngokokuvuza kwevidiyo esikubonayo.
Ukucoca iifoto zokuqala zePlayStation 4 Slim
Kule foto ungayibona phezulu, ibiya kuba ye-PlayStation 4 Slim ukuba inkampani yaseJapan ingavuma ukuyivula ngo-Okthobha.
Akukho Bhakabhaka loMntu okucaphukisa abasebenzisi bePC ngokungasebenzi kakuhle kwabo
Uluntu lwePC luyatsha ngenxa yokungasebenzi kakuhle kwesibhakabhaka somntu, amaqonga anjengeYouTube kunye neReddit athwaxwa kukuphononongwa okungalunganga.
Ukubuyiselwa kwakhona kweGoldenEye 007 HD ngoku kuyafumaneka
Namhlanje, emva kweminyaka eli-19, kwaye emva kweminyaka eli-10 yomsebenzi ngabalandeli abathile abawuthandayo umdlalo, sinenguqulo yeGoldenEye 007 HD efumanekayo kwiPC.
I-Xbox One S sele inohlobo lwayo oluphathekayo olunomdla
Kutheni le nto izinto ezingasasebenziyo? Kuthethwe kwaye kwenziwa, kwi-Xbox One S, sikubonisa le modeli isebenza ngokupheleleyo kwaye iphatheka kakuhle.
Ukuba awuyithandi iPokémon Yiya, zama i-Pokémon Uranium, enye indlela 'yodidi'
IPokémon Uranium yindlela yasimahla nesimahla kwiPokémon Go yeklasikhi, ngaphandle kokwenza izinto ezingekho mthethweni okanye iikopi zemidlalo yevidiyo ...
Zonke iinkcukacha ze-NES Classic Mini esizaziyo ukuza kuthi ga ngoku
Ngexesha lodliwanondlebe eCanada, isithethi sikaNintendo siye saphosa iinkcukacha ezimbalwa ukuba siqwalasele malunga neNES Mini Mini.
I-PlayStation 4 Neo entsha iya kuziswa ngo-Septemba
Elinye lamahemuhemu ebesikade silifunda kumnatha ixesha elide kukuphehlelelwa kwezinto ezintsha okanye eziphuculweyo ...
Abasebenzisi beFowuni yeWindows baqhubeka becela i-Pokémon Yiya kwiiselfowuni zabo
Abasebenzisi beFowuni yeWindows baqhubeka becela inguqulelo yePokémon Yiya kwiiselfowuni zabo into abangenayo kwiNiantic kodwa kukho ezinye iindlela ...
I-NES ayisiyiyo yodwa ebuyayo; I-Sega Mega Drive ibuya nge-Okthobha ezayo
Ikhonkco lomdlalo weSega Mega Drayivu nayo ihlangulwe elibeleni. Inguqulelo yezoqoqosho ehambelana nemidlalo yakudala iya kukhutshwa ngo-Okthobha ...
IXbox One iyahlaziywa kwaye ngoku ibandakanya uCortana
Umncedisi weMicrosoft ngoku uyafumaneka kwinkampani yeRedmond yeyona nto ithandwayo kwezolonwabo.
I-Pokémon Go Plus ilibazisekile kude kube ngu-Septemba
INintendo ithumele i-imeyile kwabo bathenga iPokémon Go Plus ukubazisa ukuba isixhobo sizakulibaziseka kude kube yinyanga kaSeptemba, into .....
Esi sisibhengezo esimangalisayo seNES Classic Mini
Sikushiya isibhengezo esimangalisayo seNES Classic Mini, ividiyo yentengiso enempumelelo kakhulu njengaleyo yangaphambili, ekumema ukuba uyigcine okwangoku.
Ukuthengiswa kwehlobo kufike kwiVenkile yePlayStation
Ukuthengiswa kwehlobo kufike kwiVenkile ye-PlayStation kunye nejusi entsha, imidlalo yeprimiyamu efana ne-Unchched 4 uqobo.